Hero Emblem Heroes, lalao fahatelo an'i Nintendo ao amin'ny iOS App Store | Vaovao IPhone
Fire Emblem Heroes, lalao fahatelo an'i Nintendo ao amin'ny iOS App Store
Miguel Hernandez | | About us
Taorian'ny "tsy fahombiazan'ny" fisehoana voalohany an'ny Super Mario tao amin'ny iOS App Store, Nintendo dia miloka amin'ny lalao kilasika kokoa miaraka amina lohahevitra milalao andraikitra. Amin'ity indray mitoraka ity manana ihany isika amin'ny farany Fire Emblem Heroes, traikefa nahafinaritra tao amin'ity RPG tetika ity izay afaka ankafizinao maimaim-poana, miaraka amin'ny fandoavam-bola ampidirina, ahoana no hatao raha tsy izany. Fanandramana iray hafa nataon'ny Nintendo hamongorana ireo trangam-borona hiala amin'ny afo ao amin'ny tontolon'ny haitao finday, herinandro vitsivitsy taorian'ny fidirany teo anelanelan'ny solosaina finday sy ny birao (Nintendo Switch) no nahazo ny tsena. Andao hojerentsika Maherifon'ny marika afo avy amin'ny Nintendo.
Andao aloha hanomboka amin'ny tehamaina eo am-pelatanan'ny Super Mario Run, tena lozabe tokoa ny fisintomana, na izany aza, ny maodelin'ny orinasa sy ny € 10 ho an'ny lalao finday dia tsy nifarana tamin'ny fanapahan-kevitra hentitra tamin'ny besinimaro. Mazava ny valiny, vitsy ny varotra, na eo aza ny fisintomana maro. Mazava ho azy, ny lalao dia tsy nivadika ho manintona araka ny tadiavintsika.
Manohy miaraka amin'izay izahay Fire marika Mahery fo, Ny lalao vaovao an'i Nintendo izay tonga ao amin'ny iOS App Store amin'ny endrika RPG, tsy maintsy esorintsika tsy ho eo ambanin'ny fanjakan'ny Embla isika ary hiady amin'ny herintsika rehetra. Ity saga maharitra ela ity amin'ny lalao milalao andraikitra mifandimby dia hampiorina antsika hatrany, ny tetika safidintsika dia mety hamaritra. Noho izany, tsy isalasalana fa hanana mpanaraka maro be ianao izay hikoropaka hisintona azy ireo.
Na izany aza, toa tsy mifantoka amin'izay tokony ho izy intsony ny Nintendo, ny lalao mahazatra dia malaza kokoa amin'ny finday. Fantatr'i Nintendo tsara ny fomba fampivoarana ireo karazana lalao ireo ary mbola mandà ihany izy. Tsy hiteny an'izany izahay Fire Emblem Heroes Tsy lalao mahafinaritra io, indrindra fa ny nanandrana kely azy io, fa ny mazava dia tsy ilay fahombiazana tadiavintsika.
Fire Emblem Heroesmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fire Emblem Heroes, lalao fahatelo an'i Nintendo ao amin'ny iOS App Store
YouTube dia mifangaro bebe kokoa amin'ny Chromecast amin'ny alàlan'ny iPhone
Rindrambaiko maimaimpoana ny Radio AIR izay ahafahantsika mihaino onjam-peo maherin'ny 6.000 manerana an'izao tontolo izao